झोला बोक्ने क्यारियरमा नेपालीको लास |
15 November, 2018 | Sandeep Bhattarai | 2795 Views | comments
नेपालबाट दिनहुँ विदेशीनेको संख्या बढ्दो छ । विदेश जाँदा विमानस्थल सम्म छोड्न जाने बाबुआमा, लिन विमानस्थल जान नसकेका धेरै घटना छन् । बुधबार बिहान करिब ११ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगियो तर अचम्म लाग्दो थियो विमानस्थल।
एअरपोर्ट त कतै मेलामहोत्सवमा गएजस्तै लाग्दो थियो । म विमानस्थलको अप्रेसन / बायुसेवा भवन अगाडि उभिरहेको थिए । त्यो भिड देख्दा एक्छिन हेरिरहु जस्तै लाग्यो, एक्छिन जताततै निहाले कोहि गाडीबाट सामान झार्दै छन, कोहि अंगालो मार्दै रुँदै त कोहि पीडा लुकाउन खोज्दै । त्यो भिड अनि त्यही भिडमा हराइरहेको म : स्तब्ध थिए । मेरा आँखा रसाइरहेका थिए । मेरो हेर्ने भन्दा अर्को कुनै विकल्प थिएन ।
विभिन्न देशमा रहनु भएका दाजुभाइहरु नेपालीहरूका महान चाडको अवसर परेर नेपाल पाल्नु भएको र फर्किने क्रमले गर्दा यस्तो अचाक्ली भिड भएको होला भन्ने अनुमान गरे ।विमानस्थल पुग्नुको कारण विमानस्थलको अवस्था हेरेर त्यो भिडमा हराउनु थिएन । म आफ्नो काममा लागे, बिडम्बना मेरो काम पनि त्यहीँ विदेश जाने आउने दु:ख संगै जोडिएको थियो । घरको आर्थिक अवस्था सुधार्न विदेश पलायन भएका केही दाजुभाइहरु सकुशल होइन कि; काठको बाकासमा लास बनेर आएका छन्, हो म पनि त्यही एउटा लासको प्रतिक्षामा बस्नुभएका केही आफन्तलाई भेट्न गएको थिए ।
११:२० मा हवाइजाहज अवतरण भयो भनेर त्यहाँ राखिएको डिजिटल बोर्डमा देखायो ।लास लिनका निम्ति विभिन्न प्रकिया पूरा गर्नु पर्ने रहेछ । तिनै प्रक्रिया पूरा गर्दा गर्दै थाहा भयो कार्तिक २८ गते बिहान ११:२० बजे सम्ममा विभिन्न देशबाट हवाईजाहजमा ४ वटा नेपालीहरुको लास नेपाल आइसकेका रहेछ्न । त्यस्तो सत्यता सुन्दा मेरो शरीर सिरिङ भयो । सबै प्रक्रिया पूरा गरियो लास लिनका निम्ति भित्रै सम्म ४ जना जानपाउने प्रबन्ध त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गरेको रहेछ ।
झोला बोक्ने २ क्यारियरलाई जोडेर त्यसमाथि काठको बाकासमा बन्द गरिएको त्यो लास देख्दा यो मन थाम्न सकिन । बरबर झरिरहेको आशु पुछ्दै बहिर निस्किए सबै जना त्यो लास हेर्दै हात निदारमा लादै थिए (मन्दिरमा टादैबाट ढोग गरेजस्तै ) ।
बाहिर निस्किसक्दा शव बोक्ने गाडी आइ सकेको थिएन । नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कुनै पनि देशबाट ल्याइएको लासलाई उक्त लासको घर परिवारले लान चाहेको ठाँउसम्म नि:शुल्क पुर्याइदिने प्राबधान सम्म भने गरेको रहेछ । हामी त्यही लास बोक्ने गाडीको प्रतिक्षामा थियौं नजिकै २ जना (एक युवक र वृद्ध) आउनु भयो र रुदै सोध्नुभयो लास लिन के के गर्नु पर्ने रहेछ ? मेरो पनि सानो भाइ साउदीमा बितेर आज लास आउंदैछ, के गर्ने कसरी लिने केही थाहा छैन । हामीले प्रक्रिया बुझिसकेका थियौ त्यसैले सोध्यौ कति बजेको फ्लाइट थियो आउने कतिबजे भनेको थियो ? उहाले भन्नुभो ४ बजे, लास ल्याइसक्ने समय भएको थिएन तर पनि उहाँहरुलाई प्रक्रिया थाहा नभएको कारणले हामीसंगै भएको एकजनालाई उहाँहरुलाइ सबै प्रकिया बुझाइदिन पठायौ ।
दैनिक ५/७ वटा लास नेपाल भित्रिने गरेका तथ्य रहेछ्न । नेपाल बस्दैमा नमरिने भनेर भन्न खोजेको होइन तर देश मै राम्रो गर्न सक्ने हो भने दैनिक यस्तो घटना घट्ने क्रम कम हुन्थ्यो होला ।
जब आमाले परदेशी छोरालाई काठको बाकसमा देख्छिन् (भिडियो)
#झोला बोक्ने क्यारियरमा नेपालीको लास
#विदेशीनेको संख्या बढ्दो